सर्वोच्चकाे न्यायाधीश छनोट : ‘वैदिकको च्याप्टर क्लोज !’
जनतापाटी डेस्क बिहीबार, मंसिर २६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ कोर्ष शुरु हुने देखिएको छ । न्याय परिषदले अब न्याय परिषद सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदमप्रसाद वैदिकको विकल्प खोज्ने कुरा सुनिएको छ । वुधबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चको रिक्त न्यायाधीशमा कसैको पनि नाम सिफारिस गरेन ।
यसैलाई लिएर वैदिकको विकल्प खोज्न लागिएको कुरा आउन थालेको छ । यसअघि बसेको बैठकमा वैदिकलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो । त्यो बेला दुई पल्ट परिषद सदस्य एवं विभागीय मन्त्री उपेन्द्र यादव र परिषद सदस्य एवं सर्वोच्चकै बरिष्ठ न्यायाधीश दिपक कुमार कार्कीले आपत्ति जनाए ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायपरिषद्का सदस्य वैदिकले सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्ने पक्का–पक्कीकै कारण राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । राजीनामा बुझाएलगत्तै उनलाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बसेको न्यायपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न सकेन । उनले राजीनामा दिनासाथ सरकारकै प्रतिनिधिलाई न्यायाधीश बनाउन लागिएको भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनले विरोध गरेको थियो ।
अहिले आएर परिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश राणाले बारको भावनाविपरीत न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने बताएका छन् । उनले यो कुरा बारको ४६औं कार्यकारिणी परिषद् बैठकमा सुनाए । जुन बैठक बुटवलमा भयो । उनले यसो भनेको भोलिपल्ट वुधबार बसेको बैठकले वैदिकलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको निर्णय रोकेको छ ।
सर्वाेच्चकाे न्यायाधीशमा र्‍याल चुहाउँदै 'प्रचण्ड', वैदिकलाई भर्ती गर्ने कसरत
अब न्याय परिषद्ले वैदिक अध्यक्ष रहेको एक छानबिन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले गरेको एक हाउजिङ मुद्दामा मिलापत्र गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गर्ने निर्णय भएको हो । छानबिनका लागि वैदिकको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशसहितको तीन सदस्यीय समिति बनाइएको थियो । उनीबाट त्यो जिम्मेवारी खोसिएको छ ।
वैदिकको विकल्प को ?
वैदिकसहित यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेल, अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको चर्चा भएको थियो । अब राजनीतिक आस्थाको आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरियो भने पूर्व माओवादी निकट डा. दिनमणि पोखरेल वैदिकको विकल्प हुन सक्छन् ।
यदि भित्रैबाट बढुवा गर्ने हो भने, उच्चका मुख्य न्यायाधीशद्वय चुडाल र पोखरेल मध्ये एक जना नियुक्त हुनेछन् । यी बाहेक अहिलेसम्म अन्यको नाउ बाहिर सुन्नमा आएको छैन । आफु निकटका वैदिकलाई टाँस्ने ठाउँ ठेगान भएन भने फेरि प्रचण्ड रिसाउने पक्का छ । केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा आफुहरुको एउटा पनि न्यायाधीश नभएको भन्दै प्रचण्ड सरकार ढाल्नै उत्रिएका थिए ।
वुधबारको बैठक पनि माछा–माछा, भ्यागुता
जसरी गएको विहीबार बसेको बैठक माछा–माछा, भ्यागुता भयो । त्यस्तै वुधबारको बैठक दुरुस्तै त्यस्तै भयो । विहीबार अब खाली हात उठ्नु भएन भन्दै जम्मा एक जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्दै बैठक सक्काइयो । यस्तै, वुधबार पनि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रभा बस्नेतलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरणको उजुरी पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष निर्णय भयो ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गुनासो सुन्ने र चित्त नबुझेपछि पुनरावेदन गर्ने समितिमा न्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उता, न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय सेवा आयोगका सहसचिव, उपसचिवको बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
न्याय परिषद बैठक : ‘माछा–माछा–माछा, भ्यागुता’ तर, प्रचण्ड निकट वैदिककै सम्भावना बलियो